Namuhla sinqume cabanga kudivayisi Prology Ione 1000 okuyinto Izibuyekezo bathi kule divayisi ufanelwe ukunakwa bonke abashayeli. Sikhuluma ividiyo ngemoto kubafuni kanyekanye.
Prology Ione 1000 konga isikhala gumbi hhayi abaphazamisa ngokuvumelana wezangaphakathi. Ake sibone ukuthi yini abasebenzisi ucabange ngakho. Njengoba for izici Prology Ione 1000 Izibuyekezo ukuyichazela njengoba idivayisi ukuze siyifeze ngokugcwele imisebenzi eliphezulu radar umtshina futhi DVR eziphambili HD Full. Ngokusho abanikazi, kuba izinga idatha avunyelwe devaysu ivelele ngentuthuko eziningi ezifanayo, okuyinto ivezwa emakethe wezwe lakithi. Nge ihlanganiswe radar amasignali umtshina kungenziwa ethumba njengoba imitha owaziwa "Umcibisholo" namadivayisi trudnodetektiruemyh, phakathi okuyinto - "Robot" futhi "Merlin". Ukuze kuzuzwe imiphumela kwasiza idivayisi platform bokusungula.
ukulawula isivinini ezindaweni
Idivayisi ine seGPS has a database olufakwe amayunithi amaphoyisa idatha, kanye abaqamekeli njalo. Kuvumela devaysu azise umnikazi we kusondela amaphuzu anjalo. Imininingwane avuselelwe zikhathi, ungakwazi ukubuyekeza mahhala. Prology Ione DVR 1000 akuyona yisikhathi, futhi uyonikeza usizo eminyakeni eminingi ukusetshenziswa.
Thina baxoxe "nengxenye yesibili" zedivayisi. I-DVR kungaholela eyindilinga ukudubula okuqhubekayo nge sokulungiswa okukhulu kwe-HD egcwele. Kulesi kabanzi-angle optic has a engela ukubukwa 135 degrees futhi ikuvumela ukuba liyobamba izenzakalo eziningi ngaphandle kokuguqula isithombe emaphethelweni. Aptina AR0330 - the be-CCD ephezulu - kwenza kube nokwenzeka ukudubula ividiyo, wokuyinikeza ezingeni ehloniphekile lemininingwane. Lokhu kungenzeka emini futhi ezimweni ongaphakeme ukukhanya.
Isisekelo salokhu DVR Ambarella A5S - ukusebenza high ihlanganiswe chipset eziphambili obhekene leso processing nemisebenzi zedivayisi, kanye nokwamukela izinga okusezingeni kwevidiyo. Ngaphezu kwalokho, Prology Ione 1000 has a esakhelwe eliphezulu isibonisi TFT-2.4 amasentimitha. It ikuvumela ukuba ukudlala emuva amavidyo. Ngakho, kungenzeka ukuthi sihlaziye imininingwane ngozi, uma kwenzeka. Kodwa akugcini lapho. Uma uhlola imicabango yabantu Prology Ione 1000 Izibuyekezo abonisa ukuthi abashayeli engengaphansi uyojatshuliswa ikhono ukulandelela ulwazi real-time mayelana bekubona idivayisi radar. Idivayisi libhekene ukubukeka ergonomic ilungiselelo okunekhono izilawuli kanye nosayizi ezihlangene. Ngakho, kungenzeka ukuba yahlulele ke njengoba amadivayisi inzuzo kanye nama-practical. Onjiniyela ngisho kubhekwe ukuthi kungenzeka unezela siqu esishintshashintshayo yakho eziyingozi ibalazwe kubafuni.
Izinketho devaysa ezilandelayo: umthengi ngamunye emabhokisini imanyuwali yomsebenzisi, umfundi ikhadi, intambo, imoto adaptha, ubakaki obandayo futhi kudivayisi uqobo.
Bekungeke ngempela kungalungile ukusho mayelana amaphutha Prology Ione 1000. Izibuyekezo abonisa ukuthi umgcini-mibhalo operation evuthayo oqine kwe-software yakho kumele ibuyekezwe. Ngezinye izikhathi lapho positives bamanga, okokuqandisa ephelele. Found akubona bonke radars. Okuningi osekelayo, abagxeki bathi kudivayisi ezingaphezu kuka ufaneleke amanani ayo, ugwema inhlawulo ngisho ukufakazela akanacala esimweni izingozi. Ngokusho abanikazi, umtshina radar kuwusizo emzini ngoba asiwazi njalo ithuba balandele yonke imithetho futhi isiminyaminya kubize. Ukuma komzimba akusho ezicezile ushayela. Wancoma njengoba isaziso izwi, isibonisi-alamu futhi ukubukeka Futuristic. Ngakho, umsebenzisi uthola idivayisi screen, ikhamera, olulodwa isiteshi ukuqopha isinqumo Uhlaka 1920x1080 Amaphikseli e-30 f / s, GPS-module, esakhelwe-microphone, isikhulumi, yokubuka engela 135 degrees (idayagonali) format ukwesekwa MP4, inikwa amandla yi- imoto nebhethri amanethiwekhi, ukuzimela kwemizuzu engu-10 128 wamamegabhayithi inkumbulo, wokugaya Ambarella A5, radar umtshina, kukuphi yezwi. Usayizi kudivayisi - 90x60x100 mm nesisindo 190 grams.
Manje uyazi ukuthi ukubuyekezwa DVR Prology Ione 1000 nezici sibuyekeze kulesi sihloko namuhla.
U-Brad Pitt osemusha: biography, career kanye nokuphila komuntu siqu
IsiShayina inja onesiqhova: incazelo zohlobo, ukunakekelwa amanani. abanikazi Izibuyekezo
Ukulungisa kwevidiyo amakhadi ngezandla zabo. yensimbi
Ikhodi ye-Zip - iyini?
Ukudla osomkhathi. Izibuyekezo namandla isikimu
Renaissance - kuba ... Yempucuko: isiko, ubuciko
Puppet Theatre (Lipetsk): umlando, repertoire, qembu
Kanjani ukwakha ukusebenza ngempambano. A block umdwebo lohlelo ngamakhono ahlukahlukene
Motoblock "Aurora": incazelo kanye nokubuyekeza
Hovrinskaya ishiywe esibhedlela - yezindawo ezimbi kakhulu emhlabeni!